Archive de l'auteur | NewsMada | Page 825
Basikety – Mada U14 F/G 2016 : tompondaka ny Fandrefiala sy ny Cosfa
Par Taratra sur 16/08/2016 Divers, NS Malagasy
Niady ny fihaonana. Tsy namelan’ny Fandrefiala (Analamanga), teo amin’ny zazavavy, sy ny Cosfa (Analamanga), teo amin’ny zazalahy, raha tsy izy ireo no tompondakan’i Madagasikara teo amin’ny basikety, sokajy U14 zazavavy sy zazalahy. Tontosa ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny Complexe sportif Mahajanga, mantsy ireo lalao famaranana. Teo amin’ny zazavavy, nandavo ny MB2All (Analamanga) tamin’ny isa, […]
Tontosa ny alahady lasa teo, teny amin’ny kianjan’Ankatso, ny fifaninanam-pirenena ho an’ny sokajy zandriny «Junior», eo amin’ny taranja tenisy. Saika voahaja avokoa ny lojika tamin’ity satria mbola voatazon’ireo mpilalao efa andrarezina ny anaram-boninahitra eo am-pelatanany. Anisan’ny nisongadina tamin’izany, i Tsantaniony Iariniaina, izay nanao pao-droa. Norombahiny avokoa manko ny tompondaka teo amin’ny U16, izay nandavoany an-dRobinson […]
Nifarana hatreo ny Lalao Olympika 2016 ho an’i Saholinirina Marie-Eliane. Atleta malagasy fahadimy amin’ny enina niaka-tsehatra. Tsy tody teo amin’ny manasa-dalana teo amin’ny 3000 m steeple, taranja atletisma, ny tenany. Mafy ny ady natrehina. Tsy nisy afaka mihitsy aloha, hatreto, ireo atleta malagasy dimy amin’ny enina niaro ny voninahi-pirenena amin’ny Lalao Olympika 2016 (J.O) any […]
« Sômarôho Tour” tany Mayotte : fahombiazana avokoa ny seho niisa 17
Par Taratra sur 16/08/2016 NS Malagasy, NS-Culture
« Tena misaotra an’Andriamanitra izahay fa tanteraka ilay hoe “manonga l’escalier” voalaza ao anatin’ny hiranay », hoy i Wawa. Mikasika ny fihodinana izay notontosain’ny tarika tany Mayotte io. Araka ny nampitain’ity mpanakanto ity, fahombiazana avokoa ny seho niisa 17, izay notontosaina nanomboka ny 22 jolay ka hatramin’ny omaly. Nihoatra ny 2.000 avokoa ny isan’ny mpijery, izay tena […]
Raberanto – 35 taona : afa-po ireo mankafy “revy gitara”
Nampanantena “Revy gitara an-tsehatra” ny mpikarakara ny fampisehoana ny fankalazana ny faha-35 taona nijoroan’ny tarika Raberanto. Tsy diso fanantenana tamin’izany ny mpankafy. Ireo tsy tonga teny Antsahamanitra, ny alahady teo, aza no nanenina… Nanakoako ny feon-gitara, amin’ny gadona samihafa, saingy ibahanan’ny tendry gasy. Namaly tsara ny fampanantenana ireo tarika samihafa nifandimby niaka-tsehatra, izay samy nifaly […]
Par Taratra sur 16/08/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Andro niakaran’i Masina Maria any an-danitra ny 15 aogositra ho an’ny mpino katolika. Betsaka ireo namonjy ny trano fiangonana omaly tontolo ny andro, satria ireo tsy afaka ny maraina mbola misy lamesa ihany ny tapakandro hariva. Tsy vitsy koa ny nandray ny kominio voalohany na ny confirmation fanamafisana ny finoana omaly alatsinainy, teny amin’ny tranon’Andriamanitra. […]
69 taona ny fahaleovantenan’i India : ho avy any Antsiranana ny sambo indianina
Hoavy any Antsiranana manomboka amin’ny 21 aogositra ary hijanona hatramin’ny 3 septambra ho avy izao ao amin’ny seranan-tsambo any an-toerana ny sambo iray avy any India, araka ny fanambaran’ny masoivoho indianina, Chandra Ballabh Thapliyal, omaly teny Analamahitsy, nandritra ny fanamarihana ny faha-69 taon’ny fahaleovantenan’i India. Hisy ny fifanakalozana eo amin’ny tantsambo malagasy sy indianina mandritra […]
Fijerena « éclipse » ao Mahajanga : vonona ny ao Katsepy handray ny hetsika
Hanomboka amin’ny 12 ora sy 45 mn ary haharitra hatramin’ny 2 ora sy 25 mn ny fanakonan’ny volana ny masoandro any Mahajanga ka hahatratra 94% ny fahitana izany tranga izany any an-toerana, araka ny vaovao nambaran’ny ofisim-paritra momba ny fizahantany any Boeny. Nitsangana ny komity hisahana ny fikarakarana rehetra mandritra ny tranga « éclipse ». Nambara fa […]
Fotoam-pialan-tsasatry ny mpianatra : be mpandeha indrindra ny mankany Mahajanga
Ao anatin’ny vanim-potoana fialantsasatry ny mpianatra izao. Any Mahajanga, 600 km avy eto an-dRenivohitra no be mpandeha indrindra, amina faritra maro manerana ny Nosy. Noho izay fahamaroan’ny mpandeha, hita eny ny fanararaotan’ ireo kaoperativa mpitatitra sasany. Nanomboka ny volana jolay, mitohy amin’izao volana aogositra izao, mitombo hatrany ny mpandeha mankany Mahajanga, Kaoperativa tsy latsaky ny […]
Mbola tsy tafarina ny harinkarena 2016 : mitaky fanovàna politika ara-toekarena aty Afrika ny FMI
Par Taratra sur 16/08/2016 Economie, NS Malagasy
Araka ny torohevitra avy amin’ny FMI, tokony hialan’ny firenena afrikanina maro izao ny fiankinan-doha be loatra amin’ny varotra akora fototra. Tsy dia ahitana fahombiazana loatra ny harinkarena aty Afrika amin’ny ankapobeny, izao taona 2016 izao. Vao mainka latsaka izany raha zahana ny tatitra navoakan’ny FMI ny volana avrily 2016. Ny taona 2015, mbola nahita fisondrotry […]
Endriky ny toekarena marary
Nanomboka ny taona 2008 hatramin’izao, sarotra ny mahita asa eto Madagasikara, indrindra fa ho an’ny tanora. Amin’ny ankapobeny, tsy manana na tsy ampy fari-pahaizana ny tanora. Ny tolotra izay misy indray, raha ho an’ireo vao nahavita fianarana, matetika mitaky traikefa telo taona raha kely indrindra. Mbola olana hafa ny karama sy tombontsoan’ny mpiasa raha tafiditra. […]
Tsy mahavaha olana ny hoe fanomezana toerana azy ireo manokana na fampidirana azy ireo any anaty tsena. Tamin’ny fiandohan’ity taona ity, nentanina izy ireo hisoratra anarana, mora handaminana azy, araka ny hevitry ny kaominina, nefa tsy hita izay tohiny. Tsy mazoto amin’izany mihitsy ireo mpivarotra ireo. « Aty no mahazatra ny mpanjifa hifandraisany aminay sy mora […]
Fahamaroan’ny mpivarotra amoron-dalana : tsy any amin’ny olana fototra no zahan’ny kaominina
Tranga andiany vaovao hafa indray, ny faran’ny herinandro lasa teo, ny fanesorana ireo mpivarotra eny amoron-dalana eo Analakely. Tsy zava-baovao ny ady amin’ireo mpivarotra ireo raha eto Antananarivo Renivohitra. Fa nahoana no tsy mety afaka sy miverimberina ? Fanadihadiana. Tsy any amin’ny olana fototra no zahan’ny kaominina hatrany amin’ny fanjakana foibe mihitsy, momba ireo fahamaroan’ny mameno […]
An-kitsim-po : fitakiana nampahantra vahoaka
Tsy takona afenina ny fiantraikan’ny krizy politika any amin’ny toekarem-pirenena. Singa maro azo amaritana izany : mibaribary ny tsy fananana asa, tsy fandriampahalemana, hatrany amin’ny fahasalamam-bahoaka sy ny fahalotoan’ny tanàna. Vao mainka nampahantra vahoaka ireo lazaina fitakiana ho an’ny tombontsoany nataon’ireo mpanao politika sy antoko isan-karazany hatramin’izay. Nomarihin’ny Banky iraisam-pirenena fa mitombo efatra avo heny […]
Rakotondrazafy Lalatiana : tsy te ho ratsy endrika ny HCC
Par Taratra sur 16/08/2016 NS Malagasy, NS-Politique
“Tsy te ho ratsy endrika eo anatrehan’ny fanjakana ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC): natao izay sitrapon’ny fanjakana. Tsy nihemoran’ny HCC ny lalàn’ny fifandraisana, fa nambarany hoe mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana.” Io ny fanehoan-kevitry ny mpanao gazety eo anivon’ny Hetsika fahalalahana maneho hevitra, Rakotondrazafy Lalatiana, teny Antanimena, ny faran’ny herinandro teo, tamin’ny nanapahan’ny HCC, ny […]
Pasitera Mailhol : tsy ilaina ny valifaty politika…
Nitondra ny heviny momba ny raharaham-pirenena ny pasitera Mailhol eo anivon’ny fiangonana apokalipsy (Fam). « Natao handravonana ny adilahy politika ity fotoana ity mba tsy hiseho intsony ny fifankahalana sy ny valifaty politika. Aoka hifankatia fa tsy hifanapotika eto isika », hoy izy teny Antsonjombe ny asabotsy teo tamin’ny fanamarihana ny faha-20 taon’ny Fam. Nohitsiny koa […]
Antso amin’ny fifampidinihana : milaza ho vonona ny filoha, nefa tsy hita izay eo…
Ahoana ihany ny hamahana izao olana eto amin’ny firenena izao? Milaza ho vonona amin’ny fifampidinihana ny filohan’ny Repoblika, nefa tsy hita izay eo… “Afa-mifampiresaka isika. Manokatra varavarana foana ange aho amin’ny fifampiresahana. Afa-mifampiresaka ny vahoaka malagasy, ny mpanao politika, fa tsy ny fidinana an-dalambe no vahaolana amin’ity firenena ity. Aoka mba handray lesona isika.” Tenin’ny […]
Antoko Arema : ho sahirana ny mpitondra raha tsy mihaino…
Anisan’ireo mitaky ny hifampidinihan’ny rehetra koa ny Arema ary karazan’ny nampitandrina mihitsy aza. « Ho sahirana raha tsy mihaino ny mpitondra… Ilaina ny fifampiresahana ary efa ela izahay no niteny izany. Mbola nohamafisin’ny antson’ny amiraly Ratsiraka izany tany Toamasina ny amin’ny tokony hifampidinihana », hoy ny sekretera nasionaly, Andrianarisoa Ange, omaly tetsy 67 ha. Nohitsiny anefa fa […]
Fampiharana ny sori-dalana : tonga eto indray i Chissano
Mbola mitoetra ny krizy ? Mivahiny eto mandritra ny herinandro ny mpanelanelana avy amin’ny Sadc, Joaquim Chissano. Tsy voafaritra ny anton-diany sy ireo tompon’andraikitra hihaona aminy. Tombanana anefa fa anisan’ny ahatongavany eto ny hanara-maso ny fampiharana ny sori-dalana nosoniavina ny taona 2011. Tsy mbola tanteraka ny dingan’ny fampihavanana. Eo koa ny fanonerana ireo niharam-boina noho ny krizy. […]
Fotodrafitrasan’ny Frankôfônia : ahodinkodina amin’ny lainga marivo tototra ny raharaha
“Mandroso tsara ny fanorenana fotodrafitrasa hanatanterahana ny Frankôfônia, misy aza vita aloha”, hoy ny filoha Rajaonarimampianina nitsidika fanaovana fotodrafitrasa amin’ny fampiantranoana ny Frankôfônia, eny Ivato, ny faran’ny herinandro teo. Vita mialoha, ohatra, ny fanalehibeazana ny seranam-piaramanidina. Toy izany koa ny fanamboarana ny trano fandraisana eny Ivato. Na ny lalana atao aza, ho vita mialoha. “Tsy […]
Andohatapenaka : tsy eken’ny mponina ny fandravana
Nampiaka-peo. « Efa nampiakatra ny raharaha any amin’ny filankevi-panjakana izahay ka tokony hihantona aloha ny didy ny handravana trano… Nampafantarinay ny minisitera koa izany fangatahana fampiatoana izany ka tsy tokony hitohy aloha izany » , hoy ny mpisolovava, ny Me Razafimahefa Sylvestre, omaly teny Andohatapenaka eo amin’ny « cité abattoir ». Notsiahiviny fa nanao be fiavy ireo nandrava trano […]
Ambohipo : nilatsaka tampoka nandrava « revy » ny polisim-pirenena
Ny zoma alina lasa teo, nanomboka tamin’ny 9 ora alina, nanatanteraka fidinana ifotony ny ao amin’ny kaomisaria boriborintany faharoa Ambohijatovo mikasika ny fandriampahalemana. Fisafoana tampoka ny eny amin’ny faritry ny boriborintany faharoa iny indrindra ny eny Ambohipo nataon’ireo polisy marobe. Nampiharina avy hatrany kosa ny lalàna tamin’ny fanakatonana ireo fivarotana zava-pisotro sy ireo efitrano filanonana […]
Ambohimasina : nanara-maso tany an-toerana ny komity
Manodidina ilay raharaha fanodinkodinam-bola 198 tapitrisa Ar, tao amin’ny kaominina Ambohimasina, nandefa komity mpanara-maso ny faran’ny herinandro teo ny avy amin’ny tale mpanara-maso ny volam-panjakana, nijery ifotony zava-misy. “Manana komity mpanara-maso ny ato amin’ny minisitera rehefa misy ny olana eo amin’ny fitantanana ny vola. Tsy maintsy hamarinina raha tena tonga tany amin’ny kaominina tokoa ny […]
Ny 19 jolay lasa teo nandran’ny fanjakana ny fitrandrahana nataon’ny Sinoa any Soamahamanina ary mbola tsy niverina tamin’ny fanapahan-keviny izy ireo. Nilaza araka izany, ny tale teknika ao amin’ity orinasa mpitrandraka ity, Danny Rasolomanana, fa nitsahatra ihany koa ny asan’izy ireo nanomboka teo, fa tsy araka ny filazan’ny olona momba azy ireo. Maro ireo olona […]
Bateria iray monja no nangalarin-dry zalahy… : maty ny iray, miady amin’ny fahafatesana ny iray niharan’ny fitsaram-bahoaka
Par Taratra sur 16/08/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Halatra bateria iray monja nitarika ho amin’ny fahafatesana. Niharan’ny fitsaram-bahoaka ireto roa lahy tratran’ny fokonolona tany Toamasina. Maty ny iray, ny faharoa mbola atahorana ny ainy. Tsy tohinina intsony ny vahoaka. Tsy nananan’ny fokonolona antra fa nanamparan’izy ireo ny hatezerany ireto roa lahy mpangalatra bateria, tao amin’ny fokontany Dépôt Toamasina, ny alin’ny asabotsy hifoha alahady […]
« Précédent 1 … 823 824 825 826 827 … 1 017 Suivant »